I-Eurovision 2018-2019, konke odinga ukukwazi: izinsuku, indawo nokuningi! | Nginike isikhathi sokuphumula
UGabriela moran | | Izindaba zomculo, Abaculi, General, Musica
Njengokwesiko, iYurophu igubha umkhosi wayo wezingoma zakudala obizwa nge-Eurovision lapho wonke amalungu e-European Broadcasting Union (EBU) abamba iqhaza. Kuyinto umkhosi waminyaka yonke womculo onezithameli ezinkulu emhlabeni: Ifinyelele izithameli zababukeli abayizigidi ezingama-600 emhlabeni jikelele! Isakazwa ngaphandle kokuphazanyiswa kusukela ngo-1956, ngakho-ke ingumncintiswano wakudala we-TV futhi usasebenza, yingakho lo mkhosi wanikezwa iGuinness Record ngo-2015. Kulo nyaka, I-Eurovision 2018 yenzeke e-Altice Arena edolobheni laseLisbon, ePortugal ngoMeyi 8, 10 no-12.
Umkhosi ubaziwa ngokuqhakambisa uhlobo oluthile i-pop. Izinhlobo ezisanda kufakwa zifakiwe njenge i-tango, i-arabic, umdanso, i-rap, i-rock, i-punk nomculo we-elektroniki. Qhubeka ufunde ukuthola konke okwenzeke e-Eurovision 2018!
1 Ingqikithi nokubuyekezwa okujwayelekile kwe-Eurovision 2018
1.1 Isemi final 1
1.2 Isemi final 2
2 Amaqiniso athakazelisayo nge-eurovision ...
3 Lungela i-Eurovision 2019!
Ingqikithi nokubuyekezwa okujwayelekile kwe-Eurovision 2018
Isiqubulo esiyinhloko sasithi "Konke kusendleleni!" ihunyushwe ngeSpanishi ngokuthi "Bonke abagibelayo." I- I-Thematic ikhuluma ngokubaluleka kwemisebenzi yasolwandle nasolwandle emele isici esibalulekile emnothweni wezwe elisingethe. Uphawu lumelela umnenke, odlulisa amagugu okwehlukahlukana, inhlonipho nokubekezelelana.
Umcimbi ubuqhutshwa ngu USilvia Alberto, uCatalina Furtado, uFilomena Cautela noDaniela Ruah. I-Eurovision 2018 ibine ukubamba iqhaza okukhulu kwamazwe angama-43 esewonke! Ophumelele kwaba yizwe lakwa-Israyeli ngengoma ethi "Toy" edlalwa ngumculi wase-Israel noDJ Netta Barzilai. Ingoma ikhonjiswe njengenye yezintandokazi zomklomelo izinyanga ngaphambi komkhosi. Umkhosi ngamunye uqukethe izikhathi zokuqeda: ama-semi-final ama-2 nomdlalo wamanqamu omkhulu kuzo zonke izinsuku ezahlukahlukene zomcimbi.
Ngaphambi kokuqala komkhosi, kuyisiko ukwenza umugqa owandulela owamanqamu. Uma kwenzeka kuba IPortugal, iSpain, iJalimane, i-United Kingdom, iFrance ne-Italy babe nokudlula okuzenzakalelayo ekugcinenil. Amanye amazwe ancintisane ukunqoba indawo yawo kuma-semifinal amabili ngoMeyi 8 no-9 lapho i Amazwe ayi-10 anamavoti aphakeme kakhulu kowandulela owamanqamu ngamunye angene kowamanqamu omkhulu ngomhlaka 12.
Isemi final 1
Zaziqukethe amazwe ayi-19 kanye ne- 8 ngoMeyi. Uhlu lwamazwe ancintisane ngalobo busuku kumasemifinal 1 we-Eurovision 2018 lumi kanje:
Amazwe ayi-10 kuphela athola ukudlulela kowamanqamu ngale ndlela elandelayo yokuthandwa kwamavoti: I-Israel, iCyprus, iCzech Republic, i-Austria, i-Estonia, i-Ireland, iBulgaria, i-Albania, iLithuania neFinland.
Izingoma eziyisihlanu eziyizintandokazi kanye namavoti abo bekulandelayo:
Ithoyizi. Umenzi: INetta (Israel) - amaphuzu angama-283
Umlilo. Umdlali: Eleni Foureira (Cyprus) - amaphuzu angama-262
Uqamba Amanga. Umculi: Mikolas Josef (Czech Republic) - amaphuzu angama-232
Akekho omunye ngaphandle kwakho. Umenzi: UCesár Sampson (Austria) - amaphuzu angama-231
La Forza. Umenzi: Alekseev (Belarus) - amaphuzu angama-201
Isemi final 2
I- 10 ngoMeyi futhi amazwe angama-18 abambe iqhaza, abaphikisi babalwe ngezansi:
Izinga lokuthandwa kwamazwe ayi-10 adlulele kowamanqamu limi kanje: INorway, iSweden, iMoldova, i-Australia, iDenmark, i-Ukraine, iNetherlands, iSlovenia, iSerbia neHungary.
Ukuvota okuphezulu okungu-5 kuma-semi final wesibili kuboniswe ngezansi:
Yileyondlela Obhala Ngayo Ingoma. Umculi: Alexander Rybak (Norway) - amaphuzu angama-266
Ukudansa Wena. Umenzi: UBenjamin Ingrosso (Sweden) - amaphuzu angama-254
Usuku lwami lwenhlanhla. Umenzi: DoReDos (Moldova) - 235 amaphuzu
Sinothando. Umculi: Jessica Mauboy (Australia) - amaphuzu angama-212
Indawo Ephakeme. Umenzi: URasmussen (eDenmark) - amaphuzu angama-204
Ingxenye yezimanga ezinkulu zasebusuku kuthathwa njengokungafaneleki kwePoland, iLatvia neMalta izingoma zabo ezaziphakathi kwezintandokazi ezinyangeni ezedlule ukuya kowamanqamu womncintiswano. Ngakolunye uhlangothi, i-Eurovision 2018 kwakuwumshicileli lapho iRussia neRomania zingazange zifanele ukuba ngabanqobi okokuqala emlandweni.
Usuku olukhulu lwamanqamu lwenzeka 12 ngoMeyi. Ababambe iqhaza kwakhiwa amazwe ayi-10 ahlukaniswe kumasemifayineli okuqala nawesibili, ngaphezu kwamazwe ayisithupha ayephumelele ngokuzenzekelayo. Ngakho-ke inani eliphelele le- Abangu-26 abangene kowamanqamu bancintisane ku-Eurovision 2018 futhi banikeze umbukiso omkhulu kubabukeli.
Ithebula lezikhundla kowamanqamu we-2018 Eurovision kucatshangelwa abokugcina abangama-26 limi kanje:
Ithoyizi. Umenzi: INetta (Israel) - amaphuzu angama-529
Umlilo. Umdlali: Eleni Foureira (Cyprus) - amaphuzu angama-436
Akekho omunye ngaphandle kwakho. Umenzi: UCesár Sampson (Austria) - amaphuzu angama-342
Uyangidedela ngihambe ngedwa. Umdlali: Michael Schulte (Germany) - amaphuzu angama-340
Non mi avete fatto niente. Umenzi: Ermal Meta & Fabrizio Moro - amaphuzu angama-308
Uqamba Amanga. Umculi: Mikolas Josef (Czech Republic) - amaphuzu angama-281
Ukudansa Wena. Umenzi: UBenjamin Ingrosso (Sweden) - amaphuzu angama-274
La Forza. Umenzi: Alekseev (Belarus) - amaphuzu angama-245
Indawo Ephakeme. Umenzi: URasmussen (eDenmark) - amaphuzu angama-226
INova Deca. Umenzi: USanja Ilić noBalkanika (Serbia) - amaphuzu ayi-113
UMall. Umenzi: U-Eugent Bushpepa (Albania) - amaphuzu ayi-184
Lapho Sigugile. Umenzi: Ieva Zasimauskaitė (Lithuania) - amaphuzu ayi-181
Isihe. Umenzi: Madame Monsieur (France) - amaphuzu ayi-173
Amathambo. Umenzi: EQUINOX (Bulgaria) - 166 amaphuzu
Yileyondlela Obhala Ngayo Ingoma. Umculi: Alexander Rybak (Norway) - amaphuzu angama-144
Ndawonye. Umenzi: URyan O'Shaughnessy (e-Ireland) - amaphuzu ayi-136
Ngaphansi Kweladi. Umenzi: Mélovin (Ukraine) - amaphuzu ayi-130
U-Outlaw ku-Em. Umenzi: Waylon (Netherlands) - amaphuzu ayi-121
Sinothando. Umculi: Jessica Mauboy (Australia) - amaphuzu angama-99
Viszlát nyár. Umenzi: AWS (Hungary) - amaphuzu angama-93
Hvala, ne! Umdlali: Lea Sirk (Slovenia) - amaphuzu angama-64
Ingoma yakho. Utolika: U-Alfred García no-Amaia Romero (eSpain) - amaphuzu angama-61
Isiphepho. Umdlali: SuRie (United Kingdom) - amaphuzu angu-48
Izilo. Umenzi: USaara Aalto (eFinland) - amaphuzu angama-46
Noma uJardim. Umdlali: Cláudia Pascoal (Portugal) - amaphuzu angu-39
Ngesikhathi sokulindela okukhulu, impikiswano nohlu lwezintandokazi, kumenyezelwe ukuthi ingoma enkulu yokuwina ebusuku: Toy! Kudlalwe nguDJ / umculi noNetta ngesikolo esishintshayo. Ukusebenza kwakhe kugxile esikweni laseJapan, okwadala impikiswano lapho ezama ukulinganisa isiko laseJapan kwazise izingubo, izitayela zezinwele nezimonyo kwakukhanyiselwa yisiko laseJapan.
Amaqiniso athakazelisayo nge-eurovision ...
Ngaphandle kwezinsolo zokusebenza kukaNetta Barzilai, kunezinye izenzo ezinikeze okuningi ukukhuluma ngazo ngesikhathi sokugcina. Injalo indaba ye- Ukusebenza kukaSuRie, lapho umlandeli ethathe khona isiteji wathatha umbhobho ukuveza eminye yemicabango yakhe yezepolitiki, lo muntu kamuva wakhonjwa njengesishoshovu sezepolitiki. Ikomidi libe selinikeza uSuRie ukuphinda asebenze, kepha lokho kunqatshiwe futhi umbukiso waqhubeka nesheduli ebibekiwe ngaphambilini.
Ngakolunye uhlangothi, I-China ihlolisise ezinye izingxenye zemidlalo yabadlali ngoba ikhombisa izimpawu noma imidanso ekhomba ubungqingili ngesikhathi semifinal yokuqala ye-Eurovision 2018. Isizathu sokuthi kungani Abakwa-EBU bamisa isivumelwano sabo nalesi siteshi esikuleloya lizwe ngokuphikisana ngokuthi ayakhi uzakwethu ohambelana nezindinganiso ezibandakanya wonke umuntu okuhloswe ngazo ukuthi zithuthukiswe futhi zigujwe ngomculo. Umphumela waba yi ukumiswa kokudluliswa kowandulela owamanqamu wesibili nowamanqamu omkhulu kulelo zwe.
Lungela i-Eurovision 2019!
Sino-Israyeli njengomphathi wethu olandelayo! I-Israel isebenze njengezwe elisingethwe amahlandla ambalwa: ngo-1979 nango-1999.
I-EBU yamemezela ngoSepthemba 13, 2018 ukuthi idolobha elizosingatha lo mcimbi lizoba ITel Aviv ye-Eurovision 2019. Kuzokwenzeka ezinsukwini Meyi 14, 16 no-18 e-International Convention Centre (Expo Tel Aviv).
Umncintiswano uzokwenzeka ku- IPavilion 2 ye-International Convention Center enamandla okuba ngabantu abalinganiselwa ezinkulungwaneni eziyishumi. Uma ubheka leli qiniso, i-Eurovision 2019 izoba namandla amancane kunomshicileli wangaphambilini eLisbon. Kodwa-ke, elinye lamaphephandaba abaluleke kakhulu kwa-Israyeli lamemezela lokho amathikithi ayizinkulungwane ezine kuphela azothengiswa. Lokhu, ngoba isikhala sabantu abayizinkulungwane ezimbili sizovinjwa ngamakhamera nesiteji, kanti abanye bazobekelwa i-European Broadcasting Union.
Ngokuvamile ukuthengiswa kwamathikithi kuqala phakathi kwezinyanga zikaDisemba noJanuwari. Kubalulekile ukucabangela ukuthi umhambisi namanani entengo ayahluka minyaka yonke, ngakho-ke kufanele wazi noma yiziphi izindaba. Izintengo eziphakathi nendawo zine- Izindleko ezijwayelekile zama-euro angama-60 kuma-semifinal ngamunye kanye ne-150 euros emncintiswaneni wokugcina.
Ungalilahli ithemba uma ungatholi ithikithi lakho emzuliswaneni wokuqala noma wesibili. Njengoba kulolu hlobo lomcimbi, amathikithi angagcinelwa izinsuku eziseduze nomcimbi ngezizathu zokumaketha ukushicilela umcimbi "uthengisiwe" noma "uthengisiwe." Kodwa-ke, ukwandisa amathuba okuya emncintiswaneni, kunjalo Kunconywa ukuthi ujoyine amaqembu asemthethweni e-Eurovision ngoba banengxenye enkulu yamathikithi abekelwe amalungu abo. Indawo ivame ukusondela esiteji!
UGal Gadot, umlingisi odumile wase-Israel wamenywa ukuthi abambe i-Erurovisión 2019, ukubamba iqhaza kwakhe akukakaqinisekiswa.
Kwakunamadolobha amathathu ayengadlala indawo yokuba ngumsingathi: iTel Aviv, i-Eilat neJerusalema, lawa ayekade ebambe iqhaza njengendawo yezikhathi ezimbili ezedlule lapho umkhosi wawubanjelwe ezweni elifanayo. Abagqugquzeli balo mcimbi baqinisekisa ukuthi iTel Aviv ihambisana nedolobha elinesiphakamiso esihle kakhulu ngalo mcimbi, yize zonke iziphakamiso beziyisibonelo. Kuze kube manje umkhosi une- ukubamba iqhaza kwamazwe angama-30.
Ngakolunye uhlangothi, kunemibhikisho ethile ebhekiswe kwa-Israyeli njengendawo yomncintiswano. U-Israyeli ubhekene a isimo esinzima sezepolitiki, ngakho-ke isizathu esiyinhloko sokungavumelani yisimo sayo sezepolitiki nezinyathelo ezithathe kwamanye amazwe. Amazwe anjenge I-United Kingdom, iSweden ne-Iceland zibheka ukuthi ukubamba i-Eurovision kulelo zwe kusho ukwephulwa kwamalungelo abantu futhi kuhlongozwa ukuthi kungabandakanywa kulo mcimbi.
Ngaphezu kwalokho, i U-EBU ukhiphe izitatimende ezisemthethweni ememezela ukuthi ukuphepha komcimbi kubaluleke kakhulu ezinhlelweni zokuqhubeka nezifundo zabo. Undunankulu kulindeleke ukuthi aqinisekise ukuphepha kuzo zonke izici, kanye nenkululeko yokuhamba ukuze bonke abalandeli abafisayo bakwazi ukuya kulo mcimbi kungakhathalekile ubuzwe babo. Babheka lokho kuhlonipha izindinganiso ze ukufakwa nokwehlukahluka kubalulekile emicimbini ye-Eurovision futhi kufanele ihlonishwe ngawo wonke amazwe aphethe.
Ngaphandle kokungabaza, umculo uhlanganisa abantu, amasiko futhi uqondanise imizwa ukuze izixuku ezinkulu zixhume ngemiculo nangamazwi. Ngikumema ukuthi uvakashele ikhasi elisemthethweni le- I-Eurovision ukuthola eminye imininingwane ngohlobo lwango-2018 nenqubekela phambili yangonyaka ozayo.
Ungakhohlwa imininingwane yemininingwane yohlobo olulandelayo kuzoba nokuningi okuzokhulunywa ngakho!
Indlela ephelele ye-athikili: Nginike isikhathi sokuphumula » General » I-Eurovision 2018-2019
Amabhayisikobho amahle kakhulu we-mafia
Abaqondisi bamafilimu baseSpain